Ngathi | Umdibaniso weMida yokuDlala kunye neOfisi yeePC zeOfisi yePC
Wonke umntu makonwabele ukonwaba kwemidlalo.
Uphawu lweMeeTion, olwasekwa ngokusesikweni ngo-Epreli 2013, yinkampani egxile kubhodi yezitshixo eziphakathi ukuya phezulu, iimpuku zemidlalo, kunye nezixhobo zepheripherali zeMidlalo ye-e.
"Wonke umntu makonwabele ukonwabisa imidlalo" ngumbono weMeeTion. basebenze nzima ukunceda abadlali bomdlalo kwihlabathi liphela ukuphucula ikhibhodi yokudlala kunye namava emouse. Simisele imibutho esondeleyo yokusebenzisana kwimimandla eyahlukeneyo kwaye siyenze nzulu imveliso yethu ukwenza iMveliso yeMeTTion ekuhlaleni.
Sigcina ukuhlangana rhoqo nabadlali bemidlalo abavela kwimimandla eyahlukeneyo yehlabathi. Amava abasebenzisi kunye nezikhalazo malunga nokusilela kwemveliso kukuziqhelanisa nokuphuhlisa iimveliso ezintsha. Sikwasoloko sifuna iindlela ezintsha zokuyila kunye nokusebenzisa itekhnoloji entsha kunye nezixhobo kwiimveliso zethu ukwenza ukuba abasebenzisi bethu bafumane amava amatsha aziswe bubuchwephesha obutsha kunye nezixhobo ngokukhawuleza.
Ukusukela oko yasekwa, iMeeTion Tech igcine ukukhula okumangalisayo kumzi mveliso. I-MeeTion Tech ithengise i-2.22 yezigidi zebhodi yezitshixo kunye neempuku kwi-2016, i-5.6 yezigidi zebhodi yezitshixo kunye neempuku kwi2017, kunye neebhodi zeebhodi zezigidi ezingama-8.36 kunye neempuku kwi2019.
I-logo ye-MeeTion ivela kwi "Xunzi · Emperors": amafama anamandla kodwa akakwazi. Ke, ngokusebenzisa iimeko zemozulu, zejografi, kunye nabantu, banokwenza yonke into. Umbono wayo kukunika umdlalo ogqithileyo kwimozulu, ngokwejografi, kunye neemeko zabantu ukwakha into evulekileyo, ebandakanyayo, ebambisanayo kunye neyokuphumelela. Ngomhla we-15 ku-Matshi ngo-2016, i-MeeTion yenza uphuculo lobuchule kwindalo, ngaloo ndlela kukhuthazwa ukwakhiwa kwe-eco-chain ngaphandle kwe-e-imidlalo kunye namaqabane kolu shishino.
Idilesi: Ukwakha 2, Hengchangrong High-tech Park, Huangtian, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.